Manantena ny vahoaka, manahy tena ny mpitondra… | NewsMada
Manantena ny vahoaka, manahy tena ny mpitondra…
Par Taratra sur 09/01/2016
Faran’ny omby, hena; faran’ny teny, ifanatrehana. Kabary, zato; teny, arivo. Iray ihany ny marina: iaraha-mahita ny asa vita. Mby aiza? Manantena ny vahoaka, fa be izay fanamby izay: hanorina an’itsy, hanarina an’iroa. Tsy misy fandaharanasa ratsy, fa ny tsy fanatanterahana azy…
Mahavelona ny fampanantenana sy ny fanantenana, saingy mandreraka sy mamono rehefa efa ho lava tsy misy famavany: fanombohana asa, ohatra. Na fisentoana kely fa misy fiantraikany amin’ny vahoaka ifotony tokoa izay ataon’ny mpitondra… Mba miara-mihafy sy miara-mizaka ny mafy?
Ny mpitondra indray, manahy tena. Eo, ohatra, ny toerana… famalifaliana vahoaka? Tonga ho azy mbamin’ny fampanantenana. Tsy misy maharatsy izay: ny toky, fitaka, fa hita ny atao. Loza iray, loza roa, raha mampanantena tsy misy na izay mety tsy ho vita aza. Mora foana ny mamoy.
Manahy tena tsy hahazo famatsiam-bola iadiana fo koa ? Ady fiady io… Tsy mahagaga ny fampanantenana hanatanteraka ny fepetra takina amin’izany: fampiharana fanjakana tan-dalàna sy tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fanadiovana sy fandaminana ny tontolon’ny fandraharahana…
Mbola mifampatoky be ny vahoaka sy ny mpitondra? Antony sy fototr’izany ny asa vita. Tena araka izay hetahetam-bahoaka sy izay mahamaika azy tokoa ve, ohatra, ny asa sy ny atao? Fa tsy mahadodona manokana amin’ny fahefany na amin’ny eto an-toerana, na amin’ny fifandraisana any ivelany.
Mba tsy mamela ny raharaha ho amin’izao fotsiny koa ny vahoaka hoe miandry fifidianana manaraka indray. Na tsy miraharaha, mihoalahoala, lany andro manome tsiny, miandry ny farany… Mila manara-maso, manome tanana… Tsy te hanan-dratsy tsinona. Tsy vitan-dresaka sy kabary izany.
Mila fanapahan-kevitra, finiavana, fahasahiana: fahaiza-mihaino ny hafa, fandinihan-tena amin’ny fiaikena fahadisoana sy fanitsiana izany, fiasana araka ny tena zava-misy sy mety ho vita… Aiza ny marina ifampatokisana? Na fampanantenana, na asa, na fifampitsinjovana… Vita kabary.